I-beta 5 ye-macOS 11.3 ifihla iMac nge-M1 processor | Ndisuka mac
I-beta 5 ye-macOS 11.3 ifihla iMac nge-M1 processor
Iinguqulelo ze-beta zihlala zisiqalo sophuhliso oluninzi malunga nezixhobo ze-Apple kwaye inkampani iyabonisa kwikhowudi yemithombo ezinye izikhombisi zezixhobo zayo zexesha elizayo. Kule meko, into esiyilindeleyo kukufika kweeprosesa ze-M1 kuzo zonke iikhompyuter zeMac, kunye Ukubhekiswa kwi-iMac kubonisiwe kwikhowudi ye-beta yamva nje ekhutshwe izolo.
Isuka kwiwebhu 9to5mac ibonisa iikhowudi ezimbini zeMac ezingazange zibonwe ngaphambili, iMac 21,1 kunye neMac 21,2. Ezi khowudi zifunyenwe phakathi kwekhowudi yenkqubo yokusebenza zibonelela ngesalathiso esitsha malunga nokufika kwezi processor ze-M1 kwi-iMac.
Ukuphehlelelwa kwabo ngekhe kuthathe thuba lide kwaye yile nto inkampani yaseCupertino inenjongo yokuba zonke izixhobo zidluliselwe kwiiprosesa zayo ngokukhawuleza. Emva koko siza kubona utshintsho kuyilo kwithuba elithile, into engabonakali njengeyona iphambili kubo namhlanje.
IMac ihlala ifika ukuphela konyaka rhoqo kodwa uhlaziyo lwangaphambili alugwetyelwanga ngaphandle ukongeza ezi projekthi. Iziphumo ngokubhekisele kukuthembeka, ukusetyenziswa kunye namandla ezi M1 ngoku kungaphezulu kokungqinisisiweyo kunye asithandabuzi ukuba utshintsho luzakwenzeka ngokukhawuleza okukhuluKe ngoko, abanakulinda ixesha elide ukuba bahlaziye iMac kwaye bashiye utshintsho loyilo lwamva.
Konke oku malunga noyilo yinto eyaziwa ngu-Apple kuphela, iya kuba lixesha lokubona ukuvela kwamarhe kwaye ngaphezulu kwako konke linda iApple ukuba ithathe isigqibo sokwenza i-M1 kwi-iMac yayo ukongeza okanye hayi utshintsho kuyilo kwezi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » iMac » I-beta 5 ye-macOS 11.3 ifihla iMac nge-M1 processor
I-Apple iyakuqinisekisa ukubambelela kwayo kwi-Alliance for Water Stewardship
Umkhonzi uya kuba nexesha lesithathu kwaye mhlawumbi nangaphezulu